5 siyaabood oo loo abaabulo ururinta buugaaga | Bezzia
5 siyaabood oo loo abaabulo ururinta buuggaaga
Maria vazquez | 04/05/2021 12:00 | Guriga
Kuwa naga midka ah ee akhriska ku raaxeysta waxay u muuqdaan inay qoraan cinwaanada sugaya si ay ugu akhriyaan liiska. Liis ku koraya xaddiga dawakhaad ee aynaan la qabsan karin. Annagu ma iibsanno dhammaan cinwaannada ku jira liiska, aad bey uga fog yihiin, laakiin waxaan aakhirka ku soo ururinnaa guriga a ururinta muhiimka ah ee buugaagta inaad u baahan tahay inaad hab uun u abaabusho.
Hayso maktabad taas oo aad ku wada gali karto dhammaantood waa riyada dad badan. Xaqiiqda, si kastaba ha noqotee, waxay nagu qasbeysaa inaan ku qaybinno qolal kala duwan. Xitaa sidaas nidaamka ku hay ururintayada Waxaa suurtagal ah iyadoo la adeegsado mid ka mid ah shanta qaacidoor ee aan maanta soo jeedineyno. Ma bilaabi karnaa?
Buugaagtu waxay u egyihiin inay fariistaan ​​meelaha muhiimka ah ee guryaheena, waana sababta ay dad badani muhiim ugu tahay in habka ay u abaabulan yihiin uu uga jawaabo shuruudaha ficil ahaan iyo bilic ahaanba. Ku biirista labadooda way adagtahay laakiin macquul maahan. Hab kastoo aad doorato inaad sameyso, kani waa talo-soo-jeedinteenii ugu horreysay: keyd ku hayso shelf a booska laga doorto buugaagta dhowaan yimid, kuwa aadan akhriyin.
2 Nidaam ahaan xarfaha
3 Waxaa daabacay
5 U naxariisasho
Marka noocyo kala duwan lagu cuno guri (qoraalada, sheekooyinka, sheekooyinka taariikh nololeedka, xusuus-qorrada, tiyaatarka, gabayada), abaabulidda buugaagta iyadoo loo eegayo qodobkan ayaa had iyo jeer ah xulasho wax ku ool ah. Marka lagu kala saaro nooc, marka lagu daro, haddii tirada mugyadu ay deeqsi yihiin, waxaad marwalba dib u dhigan kartaa goor dambe si aad ugu abaabusho amarka alifbeetada ama tifaftirka. Laba siyaabood oo loo abaabulo iyaga oo leh faa'iidooyinkooda iyo faa'iido darrooyinkooda.
Nidaam ahaan xarfaha
Kala soocida maktabadda alifbeeto ahaan wali waa mid ka mid ah xulashooyinka ugu caansan. Miyaad aqrisaa khayaaliga? Haddii buuggaaga ururinta nooc gaar ahi ka jiro, waxaad ku abaabuli kartaa tan dukaanka weyn ee buugaagta ka qaybgalka bilowga magaca dambe ee qorayaasha. Sidaas ayaad si fudud ugu heli kartaa buugaagta qoraaga aad ugu jeceshahay.
Ma kugu adag tahay inaad xusuusato cinwaanada iyo qorayaasha shaqooyinka aad aqriso? Haddii, sida aniga oo kale ah laba bilood ka dib markii aan akhriyo, ay kugu adag tahay inaad xitaa xusuusato doodda, tani ma noqon karto habka ugu fiican ee adiga kugu habboon. Xaaladdaada iyo tayda, qaab muuqaal ah oo muuqaal ah ayaa laga yaabaa inuu noqdo mid wax ku ool ah.
Haddii aadan xusuusan cinwaanada ama qorayaasha laakiin haddii aadan xusuusan sifooyinka bilicsanaanta ee buugga Sida dhumucda, midabka lafdhabarta ama daboolka, habab badan oo habeyn muuqaal ah ayaa caawin weyn yeelan kara. Kala soocista iyaga daabacaha, tusaale ahaan, waxay kaa caawin kartaa inaad buug si dhakhso leh u hesho.
Xaaladaha badankood, way fududahay in la aqoonsado daabacaha buuggu iska leeyahay adoo eegaya lafdhabarta. Waa mid aad u caan ah, tusaale ahaan, casaanka uruurinta Periférica. Sidoo kale xariijimaha liinta ama casaanka ah ee ku yaal lafdhabarta madow ee guriga daabacaadda Acantilado ama astaanta ururinta Anagrama.
Habkani, marka lagu daro inuu yahay mid wax ku ool ah, wuxuu noo oggolaanayaa inaan abaabulno maktabadda si buugaagta leh astaamo isku mid ah ay u wada socdaan. Dhaqan na siiya a nidaamsan oo soo jiidasho lehguud ahaan maktabadayada.
Hab la leh joogitaan badan oo hadda ku jira Instagram, shabakad wax walba oo umuuqda in muuqaal ahaan lagu daryeelayo, ay tahay abaabulida buugaagta midab ahaan. Wax ku ool ah? Haddii, siddayda oo kale, aad leedahay xusuus is beddelay, waxay noqon kartaa inta buugga la ururinayaa uu yar yahay.
Ma iska indho tiri karno in buugaagta leh lafdhabarta madow iyo cadaan ay u badan yihiin. Waa run in ay jiraan dad aad u tiro badan oo daabacayaal ah, oo badiyaa cusub iyo / ama madax-bannaan, oo sharad ku leh midabka laakiin waa dhif iyo naadir in la helo, tusaale ahaan, buugaag buluug ama cagaar cagaaran leh, si aan u bixino tusaalooyin yar. Marka haddii aragtida dukaankaaga buugaagta waxay noqon doontaa qurux laakiin malaha isku dheelitirnaan la'aan wax badan oo aad ka qaban kartana ma jiri doonto.
Ma jeceshahay buugga? Ma kula talin lahayd qof? Dareenka uu qofku ka qabo akhris gaar ah inta ay tahay inaad ku soo celiso maktabada waxay noqon kartaa mid sax ah habka kala soocida sida kuwii hore. Maxaa diidaya inaad buugaagtaada u abaabusho saddex qaybood? Kuwii aad ka heshay ama akhriskoodu ku calaamadiyey dhinac ka mid ah. Dhanka kale, kuwa aad ka heshay laakiin dadka kaliya kula talin lahaa. Ugu dambeyntiina, kuwa aadan jeclayn oo aad u badan tahay inaad iibiso ama aad siiso qof ku raaxeysan kara.
Ma isticmaashaa wax shuruudo ah si aad u abaabusho ururinta buuggaaga?
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Guriga » 5 siyaabood oo loo abaabulo ururinta buuggaaga
Soo noqoshada 'Los Hombres de Paco' ayaa ku sii dhowaanaysa!
Tofu iyo likaha gratin cannelloni